Hardware Error — MYSTERY ZILLION
January 2009 edited February 2009 in Help Desk
ကျွန်တော် စက်တွေ၀ယ်တာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး .... အားလုံး အဆင်ပြေတယ် ... သုံးမယ်ဆိုတဲ့ စက်ကျမှ တော်တော်ဖောက်တာပဲ ... သုံးရင် ခဏပဲရတယ် ... နည်းနည်းအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ကျကျသွားတယ်ဗျ ...ဘယ်လိုမှလည်း ပြန်တက်မလာတော့ဘူး ... အခုလည်း စိတ်မရှည်တော့တာနဲ့ Windows အသစ်ပြန်တင်မယ်ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တယ် ... အခုတိုးလိုးတန်းလန်းဖြစ်နေပြီ ... Error ကြီးပဲ တက်နေတော့တယ် ... File \_i386\_ntkrnlmp.exe could not be loaded. The error code is 7. Setup cannot continue. Press any key to exit . ဆိုတာ ချည်းပဲ ပြနေတယ် .. ဘယ်လိုမှလည်း ရှေ့ဆက်မသွားတော့ဘူး ... HDD မကောင်းဘူးထင်လို့ အသစ်လဲထားတယ် ... အဲဒါလည်း မရဘူး တိုင်ပတ်နေတုန်းပဲဗျ ... ကူညီကြပါဦး .... ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲလို့ ...:77::77::77::77::77::77:
အစ်ကိုရေဖြစ်နိုင်တာပြောကြည့်ဦးမယ်စမ်းကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်လဲဖြစ်ဘူးတယ်။ hardisk ကို format ချတဲ့အခါမှာ quick format မချပါနဲ့ ရိုးရိုးချပါ။ ပြောချင်တာက windows တင်မယ်ဆိုရင် quick format ချမလား ရိုးရိုးချမလားမေးရင် ရိုးရိုးပဲချပါ။ အဲဒါဆိုအဆင်ပြေသွားပါ့မယ်(ထင်တာပဲ)။ ဒါမှအဆင်မပြေသေးရင် တစ်ခြားစက်တစ်လုံးမှာသွားတတ်ပြီးတော့ format ချကြည့်ပါ။ quick format မရွေးနဲ့နော်။ စမ်းကြည့်ပါဦး...အဆင်ပြေပါစေ...
Error ကြီးပဲ တက်နေတော့တယ် ... File \_i386\_ntkrnlmp.exe could not be loaded. The error code is 7. Setup cannot continue. Press any key to exit .
အဲဒီ error ကြီးပေါ်တယ်ဆိုရင်တော့ အင်စတော်လာ အခွေကိုပြန်စစ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ အင်စတော်လာထဲက i386 ကိုရှာမတွေ့ဖြစ်နေတာပါ။ ကျွန်တော့် အရင် xp service part2 အခွေလည်း အစက အကောင်း နောက် တစ်ခါလည်း အင်စတောလုပ်ရော အဲဒီလိုမျိုး error တက်လာလို့ အသစ်၀ယ်ပြီးလုပ်တာရသွားတယ်။ အခွေလဲပြီး စမ်းကြည့်ပါဦး။
ဟုတ်တယ်ဗျို့ ကျွန်တော်လဲဖြစ်ဖူးတယ်၊xp service part2ခွေပဲ။အဲဒီ error ကြီးပဲပြ တယ်။ ခွေ အသစ်၀ယ် install လိုက်မှ good သွားတယ်။ ဖြစ်နိုင် i386 အကြောင်းလေးရှင်းပြပေး ပါ လား။ မသိ လို့ ပါ ။
အကိုတို့ရေ အခုတော့ ရသွားပြီဗျ ... ညစ်ညစ်နဲ့ အကုန်လုံးကို လိုက်စစ်ကြည့်လိုက်တာ နောက်ဆုံးတော့ rom လဲပြီးတော့ စမ်းကြည့်လိုက်တာ အသစ်ပြန်တက်သွားပြီ ... ကျေးဇူးပါပဲနော် ....
silversky wrote: »
ဟိ သိဘဲနဲ့ ဆရာကြီးလုပ်လိုက်ဦးမယ်။ မှားရင်ခွင့်လွှတ်နော်။:D
ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ i386 ဆိုတာ window တင်ဖို့ အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို့ပဲ ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒီအစိတ်အပိုင်းမပါရင် window တင်လို့မရတာ အသေအချာပါ။ အတိအကျသိချင်ရင်သိသူများအားမေးမြန်းကြပါကုန်။:((